०७७ भाद्र ४ गते बिहिवार अर्थात २० अगष्ट २०२०, कस्तो छ तपाईको भाग्य र भविष्य हेर्नुस – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/०७७ भाद्र ४ गते बिहिवार अर्थात २० अगष्ट २०२०, कस्तो छ तपाईको भाग्य र भविष्य हेर्नुस
०७७ भाद्र ४ गते बिहिवार अर्थात २० अगष्ट २०२०, कस्तो छ तपाईको भाग्य र भविष्य हेर्नुस
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)- आज अरुको कुरामा हत्त बिस्वास नगर्नु होला । नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। स्वास्थ्यमा बिशेष ख्याल राख्नु होला । बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – कठिन परिश्रम गर्नु पर्ने छ। तनाब बड्ने छ। झैझ’गडाबाट टाढै बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। पारिवारिक विवाद हुन सक्छ। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। आजको शुभ अंक २,७ र १२ रहेको छ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) – समाजमा सम्मानित हुँने योग रहेकोछ ।मन मा सन्तुष्टि रहने छ। सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । बोलि ले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। धन लाभ को योग छ। आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) – पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।मन ले सोचेको पुग्ने छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ।सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । आजको शुभ अंक २ र ४ रहेको छ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) – मन मा सन्तुष्टि रहने छ।आयआर्जन बढ्ने छ ।पठन–पाठनमा जोड दिनुहोला। जस मिल्ने योग छ।नया कामको सुरुवात गर्न सक्नु हुन्छ। आजको शुभ अंक १ र ५ रहेको छ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) – सामाजिक रुपमा अपजस आउन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। काम बिग्रिन सक्छ। नया काम को थालनि न गरेकै बेस। सोचेर बोल्नु होला। आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) – पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।आटेको काम पुरा हुनेछ। बोलि ले साथ दिने छ।आज तपाइको घा’तक बार रहेको छ त्यसैले नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। आजको शुभ अंक २ ७ र १२ रहेको छ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) – आटेको काम पुरा हुनेछ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। समाजमा सम्मानित हुँने योग रहेकोछ ।मन मा सन्तुष्टि रहने छ। आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) – शारिरिक र मानसिक मजबुति मिल्ने छ। बोलि ले साथ दिने छ। जस मिल्ने योग छ। नया काम को सुरुवात महिला मित्र बाट गराउदा राम्रो हुनेछ। आजको शुभ अंक ४,९ र १२ रहेको छ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) – सफलता को लागि हतार नगर्नु होला।राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) – आय बढ्ने छ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ।माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) – माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ । नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको शुभ अंक ४ ९ र १२ रहेको छ।
आजको राशिफल साउन २७ गते मंगल बार : पाथी भारा माताले सबैको क`ल्या ण गरुन !
शनिको साढे सात ग्रह दशाको दोष हटाउन के गर्ने ???
अबको ५ वर्ष ४ राशिले ढिलो नगरी यी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस, सफलताले शिखर चुम्नेछ !